हुनत डा. भट्टराई नेतृत्वको �कामचलाउ� सरकारमा गृहमन्त्री मात्रै नभएर उपप्रधानमन्त्री समेतको बिल्ला भिर्दै वरियताक्रममा दोस्रो रहेका बिजय कुमार गच्छदारको नाम उल्लेख छ । तर, उनी आफूले पाएको गृह प्रशासनको जिम्मेवारीप्रति कति जवाफदेहि छन् त ? प्रश्न उठेको छ । एघार वर्षे द्वन्द्वलाई पन्छ्याएर मुलुक शान्तिको ट्रयाक खोज्दै यतीबेला संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रीरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ ? उनीहरुबाट कस्तो दायित्व निर्वाह हुनु पर्छ ? त्यतातर्फ सम्वन्धित कसैको पनि ध्यान पुगेको जस्तो देखिएन । सायद यसैलाई भन्छन्, �नालायकी र निकम्मापन� ।
गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रसिद्ध मनकामना पुगेर आफ्नो बिस वर्षदेखिको गृहमन्त्री हुने इच्छा पूरा भएकाले अब सफल गृहमन्त्री बन्दै राष्ट्रपति बन्ने सपना पूरा होस भन्ने कामना गर्न मन्दिर ढोकेर फर्केका बिजयकुमार गच्छदार आफ्नै कार्यशैली र व्यवहारका कारण दिनदिनै �बद्नामी� कमाउँदैछन् । देशको गृहमन्त्री, जसले देश र जनताको सुरक्षाको चिन्ता लिनु पर्ने व्यक्ति ! तर, जनतालाई नै तर्साएर, धम्क्याएर, गुण्डागर्दी गर्दै त्यसै लुटेर खान पल्केका �डन�को सल्लाह र सुझावमा चल्न थालेपछि त्यो देशको सुरक्षा संयन्त्र कसरी चलेको होला ? सम्झँदै कहाली लाग्छ कि लाग्दैन ?
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईप्रति एउटा जिज्ञांसा छ, कृपया झिँझो नमानी जवाफ मिल्थ्यो कि ? बिजय कुमार गच्छदार अर्थात् तपाईका सहयोगी मन्त्री देशका गृहमन्त्री हुन् कि मधेशी लोकतान्त्रिक फोरमका ? अनी, गृहमन्त्रीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् कि छैनन् त ? यसमा तपाईंको ध्यान पुग्न सकेको छ कि छैन, प्रधानमन्त्रीज्यू ? प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको प्रश्न सामान्य भए पनि अर्थ गम्भीर छ । यद्यपि, उहाँले कसरी लिनु हुन्छ, त्यो जवाफ प्राप्त भएकै खण्डमा मात्र पत्तो लाग्ला । सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट जवाफको अपेक्षा गरिएको छ । गृहमन्त्री भनेको प्रहरी र प्रशासन परिचालन गर्न सक्ने भएकाले निकै शक्तिशाली पद मानिन्छ । शान र मानको यो पदको गरिमा आफ्नै कार्यशैलीले देखाउँछ । तर, किन गृहमन्त्री गच्छदारले पछिल्लो समय आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीतर्फ बेवास्था गरेका ? किन यसरी लत्तो छाडेका ? सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राख्दै आयोजना गरिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रिय सुरक्षा सम्वन्धि गोष्ठी समेत बहिष्कार गर्न गच्छदारलाई कुन नैतिकताले दिएछ ? पूर्वतिर सुरक्षा गोष्ठी हुँदा पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन सुदुरपश्चिमतिर लाग्ने, सय मिटरको डिस्टेन्समा सुरक्षाभेला भइरहँदा कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै रिसोर्टमा आराम गर्ने ? त्यही हो गृहमन्त्रीको नैतिकता ? अनी त्यही हो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी ? थोरै पनि नैतिकता बाँकी छ भने पदिय जिम्मेवारीप्रति लत्तो छाड्नु भन्दा पदबाटै राजीनामा दिनु पर्ने होइन र ? जनताले त प्रश्न गर्न थालिसिके, प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने होइन र ?
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो �स्वार्थ� पूरा हुन सकेन भन्दैमा संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रमा खलल पुग्ने गरी यसरी लत्तो छाडेर पार्टी कार्यक्रममा हिँड्ने गृहमन्त्रीलाई बर्खास्थ गर्नुको विकल्प छैन । त्यसो गर्न जति बिलम्व हुन्छ, त्यती नै सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्रमा खरावी बढ्दै जानेछ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगोस्, लाजै पचाएर सुरक्षा घेरामा रहने गच्छदारको पनि चेत खुलोस् ।
Posted on:October 3, 2012, 4:54 am